‘कलाकारको कमब्याक हुँदैन’
मनोरञ्जन कार्तिक १०, २०७७
काठमाडौं – कमब्याक अर्थात पुनरागमन, विशेषत रंग पत्रकारितामा यो शब्दको बढी नै प्रयोग हुन्छ । आफ्नो विधामा सक्रिय कलाकार केही समय गुमनाम भएपछि पुनः सोही क्षेत्रमा आउँदा सञ्चारकर्मी र पत्रकारले समाचारमा ‘कमव्याक’ वा ‘पुनरागमन’ शब्दको प्रयोग गर्छन् । मिडियामा प्रयोग हुने यो शब्द प्रति सम्बन्धित स्रष्टा सकारात्मक छैनन् । लामो समय कलाकारितामा सक्रिय कलाकारहरु केही कारण विशेषले कार्यरत क्षेत्रबाट टाढिएर पुनः फर्किदा ‘कमव्याक’ वा ‘पुनरागमन’को प्रयोग हुनुमा उनीहरुको असन्तुष्टि प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
एक समय नेपाली फिल्ममा व्यस्त अभिनेता विराज भट्ट बीचको केही वर्ष भोजपुरी फिल्ममा सक्रिय रहे । उनी झन्डै ६ वर्षपछि फिल्म ‘जय पर्शुराम’मा देखिए । यो फिल्मपछि उनी आफैंले फिल्म ‘साङ्लो’को निर्माण र निर्देशन गरे । फिल्म ‘जय पर्शुराम’मा देखिँदा उनलाई मिडियाले ‘कमव्याक’ लेखे । तर विराज स्वयं भने ‘कमव्याक’ शब्दमा सन्तुष्ट छैनन् । ‘मलाई कमव्याक भन्ने चिज नै मनपर्दैन । किनभने त्यो प्रयोग हुने शब्द नै होइन । हामी दर्शकले र राष्ट्रले नै माया गरेको कलाकार हौं’, विराज भन्छन्, ‘राष्ट्रका हरेक निकायमा जाँदा हामीलाई एउटा अलग प्रकारको सम्मान छ, माया छ । चाहे त्यो सरकारी निकाय, आर्मीको ब्यारेकमा निस्कँदा खेरी या पुलिस प्रशासनका कुराहरु हुन् । सानो–सानो ठाउँमा पनि कलाकारलाई एउटा सम्मान दिने ठाउँ छ । त्यसकारण त्यो लेबलमा माया पाइसकेको मान्छेहरु हामी फिल्ममा थोरै ग्याप होला, यताको मान्छे उता जाला, उताबाट यता आउला । त्यसलाई चाहिँ कमब्याक शब्द प्रयोग गर्नु के उचित हो र ?’
विराज आफूहरुको प्रयास एउटा राम्रो फिल्म दिने भएकाले केही अन्तरालमा फिल्ममा आउँदा ‘कमब्याक’ वा ‘पुनरागमन’ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘हामीले फिल्म उद्योगमा जुन लोकप्रियता पाएका छौं । त्यसलाई कसरी जोगाउने र राम्रो फिल्ममा काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसका लागि हामीले कति मेहनत गर्न सक्छौं । दर्शकलाई कसरी खुशी पार्न सकिन्छ भन्ने हो । त्यसमा केही ढिलो चाँडो त अवश्य नै हुन्छ’, उनी भन्छन् ।
एकसमय ‘चकलेटी हिरो’ को उपमा पाएका अभिनेता रमेश उप्रेतीले २०५४ सालमा फिल्म ‘पराईघर’बाट अभिनयमा डेब्यू गरे । त्यसयता एकपछि अर्को फिल्ममा व्यस्त भइरहँदा उनी अमेरिका उडे । झन्डै ९ वर्ष अमेरिका बसेपछि नेपाल फर्किएर उनले ‘ब्रासलेट’मा अभिनय गरे । ‘पहिलो कुरा कलाकारको कमव्याक वा पुनरागमन हुँदैन । व्यस्त जीवनबाट मानिसले केही समय विश्राम लिन्छ । हलिउड र बलिउडमा पनि कलाकारले विश्राम लिएका छन् । अमिताभ बच्चन, आमिर खानलगायतका कलाकार पनि केही समयको ग्याप पछि फिल्ममा देखिए । आमिर खानले सन् २००१ मा ‘लगान’ बनाएपछि २००४ को अन्त्यतिर ‘मंगल पाण्डे’ फिल्म गर्नुभयो । उहाँलाई कसैले कमब्याक भनेन’, रमेश भन्छन्, ‘कलाकारहरुमा के लागु हुन्छ भने जुन मान्छेको हजारौंमाझ एउटा छवि बनिसकेको छ । जसले दर्शकबाट धेरै माया पाइसकेको छ । ती कलाकारमा कमव्याक वा पुनरागमन भन्ने हुँदैन । कलाकार कहिले रिटायर्ड पनि हुँदैन र डेट एक्सपायर पनि हुँदैन । किनभने त्यो त कला देखाउने हो । विभिन्न कालखण्डमा उमेर अनुसार चरित्रमा ढाल्ने हो । मलाई लाग्छ प्रेमकथाका फिल्महरु कोरिया र नेपालमा मात्र अहिले बनिरहेका होलान् । अन्य मुलुकले त व्यक्ति लक्षित फिल्म बनाइरहेका छन् । त्यसकारण यो कमव्याक वा पुनरागमनमा मेरो सहमत छैन ।’
रमेशले अमेरिका उड्नु अघि फिल्म ‘आफ्नोपन’मा अभिनय गरे । ‘मैले एकै दिन दुईवटा फिल्ममा काम गर्नुपथ्र्यो । जसले गर्दा मलाई समस्या भयो । फिल्मको सुटिङ तालिका नै जुध्ने देखियो । निर्माताले भनेको नमान्दिने गर्दा मलाई प्रेसर भयो । त्यसपछि मार्केट ड्रप भयो । पहिला जस्तो बजार भएन । त्यसपछि मैले एकदुई वर्ष काम नगर्ने भनेर अमेरिका गएँ’, रमेश भन्छन् ।
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको बुझाई विराज र रमेशको भन्दा केही फरक छ । ‘कलाकारको ग्याप हुन्छ, फिल्ममा काम गर्नु भनेको ९ देखि ५ बजेसम्म जागिर खाए जस्तो होइन । त्यसकारण एउटा प्रोजेक्टबाट अर्को प्रोजेक्ट आउदा कहिले लगातार हुन्छ, कहिले हुँदै हुँदैन । किनभने यहाँ चलिरहेको कलाकारलाई लिइन्छ, नचलेकोलाई लिँइदैन’, करिश्मा भन्छिन्, ‘कतिपय अवस्थामा कलाकारले चाहेरै पनि काम गरिरहेको हुन्छन् भने कतिपयमा चाहिँ केही समय फिल्ममा काम नगर्ने भन्ने चाहनाले पनि हुन्छ । मेरो बुझाईमा लामो समयपछि फिल्ममा देखिएकाले मिडियाले कमव्याक भन्ने शब्द प्रयोग गरेको होला । यो बुझाई हो भने ठिकै हो । कलाकारको कुरा गर्दा चाहेर वा नचाहेर ब्रेक गरेको हुँदेन । फिल्ममा मेरो लामो ग्याप भयो । अब फिल्मबाट अफर आयो र अभिनयमा आएँ भन्ने त्यसलाई कमव्याक भन्ने कि किनकी मैले छोडेको त होइन नि ।’
करिश्मा मिडियाले ‘कमव्याक’ वा ‘पुनरागमन’ शब्द प्रयोग गर्नुमा आफूलाई कुनै समस्या नरहेको बताउछिन् । ‘किनभने मिडियाले लेख्दा आम दर्शकमाझ एउटा सूचना वा समाचार सम्प्रेषण हुन्छ । दर्शकलाई पनि फलानो कलाकार फेरि फिल्ममा आउदैरहेछ भन्ने सन्देश पुग्छ’, उनी भन्छिन् । करिश्मा पनि लामो समयको अमेरिका बसाईंपछि नेपाल फर्किएर फिल्ममा सक्रिय छिन् । उनले झन्डै १२ वर्ष पछि फिल्म ‘फागु’ निर्माण गरेकी थिइन् ।
एक्सन र स्टन्टमा खप्पिस अभिनेता निखिल उप्रेती मुम्बईको झन्डै पाँच वर्षे बसाईपछि नेपाल फर्किएर फिल्म ‘भैरव’मा अभिनय र निर्देशन गरे । निखिल आम मानिसले स्वीकारे पनि वा नस्वीकारे पनि आफूहरु फिल्म हल, दर्शक र फिल्म उद्योगबाट आउट भइसकेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले अभिनय गरेका फिल्म फ्लप भएकै हो । फिल्म हलले पनि हामी फ्लप भएको कारण फिल्म नलिएकै हो’, उनी भन्छन्, ‘जीवनमा जोश भएको समय नेपाली फिल्म उद्योगमा बिताएको हो । त्यो समयमा ढुंगा खाए पनि पचाइन्थ्यो । त्यसैको बलबुतामा सात तलबाट हाम फाल्ने, हेलिकप्टरबाट हाम फाल्ने काम पनि गरियो । यी सबै कुरा सम्झिएर बस्नुको के औचित्य रह्यो र । फ्लप भइसकेपछि चुप लागेर बस्नु पनि एउटा कला हो नि । त्यो कलाको म फलोअर्स हो । त्यसकारण मिडियामा ‘कमब्याक’ वा ‘पुनरागमन’ शब्द प्रयोग भइरहँदा म खुशी पनि छैन, दुःखी पनि छैन । किनकी हामीले त्यस्ता धेरै शब्दबाट पार पाइसकेका छौं ।’
अभिनेता सरोज खनाल, राजाराम पौडेल लामो अन्तरालपछि फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय छन् । अभिनेता शिव श्रेष्ठ, राजेश हमाल पनि केही समयको ग्यापपछि फिल्म ‘बागमती’मा एकसाथ देखिएका थिए ।
Previous Postआज दशैं, टीकाको उत्तम साइत १०ः१९ बजे
Next Postहुम्लाका महिलालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड सहयोग
नेकपा सचिवालय आजः ओली–प्रचण्ड संवादशुन्य, औपचारिक विभाजनको घोषणा बाँकी?
किसान आन्दोलनमा किन मौन छन् ठूला स्टारहरु ?
मुम्बई(एजेन्सी)– भारतीय केन्द्रीय सरकारले ल्याएको कृषि कानूनको विरुद्ध देशभरका किसानको राजधानी दिल्लीसँग जोडिएको सीमानामा आन्दोलन जारी छ । उनीहरु आफ्नो माग पुरा गराउनका…
युट्युबमा आयो अनमोलको क्याप्टेन
काठमाडौ – अभिनेता अनमोल केसी अभिनित फिल्म ‘क्याप्टेन’ युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । दिवाकर भट्टराई निर्देशिक फिल्म ओएसआर डिजिटलको अफिसियल युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक…
दिप्ताको सांगीतिक यो जिन्दगानी
काठमाडौँ । बेलायतमा बस्दै आएकी गायिका दिप्ता थापाको स्वरमा रहेको गीत ‘यो जिन्दगी’ सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा सन्जिता देउजाको शब्द र…